आफ्नो छुट्टीलाई अझै खास बनाउन जानुहोस चितवन , यी स्थान पर्न सक्छन तपाइको रोजाईमा ! - ParyatanBazar.com
आफ्नो छुट्टीलाई अझै खास बनाउन जानुहोस चितवन , यी स्थान पर्न सक्छन तपाइको रोजाईमा !
पर्यटन बजार१० चैत्र २०७५, आईतवार मा प्रकाशित
चैत १०, चितवन । नयाँ वर्ष आउँदै छ कहाँ घुम्ने कसरी मनाउने , कुन स्थान रोज्ने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ भने तपाइको लागि सही रोजाई बन्न सक्छ चितवन जिल्ला । चितवनलाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा लिने गरिन्छ । काठमाडौं, पोखरापछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, हात्ती, पाटे बाघ, विभिन्न चराचुरुङ्गी हेर्न तथा जंगल सफारीको आनन्द लिन पर्यटकहरु यहाँ आउने गरेका छन् ।
चेपाङ्गबस्तीहरु, सुन्दर हरियाली पर्वत श्रृङ्खला तथा हिमालहरूको अवलोकन गर्न सकिने यो रमणीय क्षेत्र सिराइचुली घुम्न जाँदा हात्तीवाङ्गमा होमस्टे सुविधा उपलब्ध छ । प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको सम्भावना समेत रहेको सिराइचुली क्षेत्रमा सिद्धबाबाको ऐतिहासिक मन्दिर रहेको छ ।
जंगल भ्रमण, हात्ती सयर, डुंगा सयर, थारु, बोटे, दराई संस्कृति अवलोकन, स्थानीय परिकार आदि यहाँका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणहरु हुन् । पटिहानी पर्यटन क्षेत्रमा मानव निर्मित अम्ब्रेला टावर थप आकर्षण बनेको छ । निर्माणाधीन अम्ब्रेला स्ट्रिट अन्तर्गत करिब ४५० ओटा फाइबरका छातामुनिबाट १२० मिटर पैदल यात्रा गर्दा पर्यटकहरुले फरक अनुभूति प्राप्त गर्दछन् । भ्युपोइन्ट, सेल्फीगेट, रेस्टुरेण्ट, शौचालय, पाकिङ, आवास लगायतका सेवाहरू उपलब्ध यस गन्तब्यमा पर्यटकहरूले प्राकृतिक वातावरणमा आनन्द प्राप्त गर्दछन् ।